Colorado mupurisa anorayira kusarudza kwake - TELES RELAY
HOME » kambani Colorado mukuru mukuru anorayira kusarudza kwake
Media playback haitsigirwi pafoni yako
Nhoroondo yevhidhiyo Mapurisa eColorado anomanikidza murume kuunganidza marara pamusana wake
Colorado mapurisa anomusiya mushure mekupikisana nevadzidzi vemauto kuunganidza marara pamberi pekugoverana dzimba
John Smyly anobvunzurudza uye anotevera Zayd Atkinson, mudzidzi kuNyopa University, pedyo neimba yake muBoulder.
"Handina zvombo! Iyo ibhakiti! Icho chikamu! "VaAtkinson vakati muvhidhiyo inotorwa nemuvakidzani.
Mumiririri Smyly akaisa pfuti yake pfuti uye akadana kusimbiswa munguva yeChirongwa cheMarch.
Pasi pemutemo wehurumende, Bwana Smyly acharamba ari mubhadharo yeguta kusvikira February 2020.
I Associated Press inoti ichawana mari uye inobhadhara munguva iyi uye ichabhadharwa. chero ipi zvayo isingashandisi yakasara.
Dhipatimendi rePurisa rePurisa rinoongorora rinoratidza kuti VaSyyly vaputsa mitemo yematare pamusoro pesimba remapurisa, kuvimba nemapurisa.
Mutambi "akanga asina simba rekuvhara VaAtkinson", iyo dhipatimendi yakanyora mubhuku rake . "Mukuru wezvematongerwo enyika akabatanidzwa akanga asina chikonzero chinokonzera kupomera VaAtkinson chero upi zvake hwemhosva."
Zviremera zvakare zvinoparidzira chinyorwa chekhamera pamitumbi yemapurisa aripo panzvimbo yacho.
Panguva yechiitiko ichocho, murume wacho akapa vakuru vakuru vedhidhi yake yunivhesiti uye akadzokorora kuti iye aigara uye akashanda muchivako chokugoverana.
Mr Smyly akadana kuchengetedza nokuti Mr Atkinson "akaramba kuisa chinhu chisina kunaka".
Mutsvapurisa wekutsvaga wakaratidza kuti, kunyange zvazvo Bwana Smyly asina kushandisa rurimi rwemadzinza panguva yechiitiko uye "zvakananga" akavaudza kuti zviito zvake zvakanga zvisingaiti kubva kumudzidzisi waAtkinson, mudzidzi havana kubvumirana.
VaAtkinson vakataurira muparidzi wepanzvimbo CBS4 Denver kuti aifara kuti Agent Smyly "akachengetedzwa pane chimwe chinhu, asi zvinoratidzika kunge zvisinganyanyi kushandiswa."
Gweta revadzidzi, Siddhartha Rathod, akati pepanhau repanhau reDenver Post rakati akaodzwa mwoyo nokuti VaSyyly havana kudzingwa uye kuti anogara achibhadharwa.
"Guta reBoulder rinobhadhara mukuru uyu ari pedyo nemadhora e80 000 [£ 71,500] nekuputsa kodzero dzeZayd dzekodzero dzepamutemo," akadaro. "Kana iwe kana ini tikaita izvo Agent Smyly akazviita kuna Zayd Atkinson, kwete chete chete taizodzingwa pakarepo, asi isu taizopomerwa mhosva."
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48306822